iMovie Muqaal - Sida loo sameeyo a iMovie Photo Muqaal la Music
iMovie waa barnaamijka pre-rakibay soo kasta Mac cusub. Waxay bixisaa hab fudud oo weli xirfadeed si ay u sameeyaan filimada slideshow ka photos, videos iyo music. Haddaba sidaas u gaar ah slidleshows iMovie aad adigoo raacaya tallaabooyinka hoose.
Qeybta 1: Sida loo sameeyo slideshow in iMovie
Qeybta 2: hab fudud lagu sameeyo slideshow ee Mac
Tallaabada 1. slideshow iMovie Samee maktabadda iPhoto
iMovie muuqan la shaqeeya iPhoto. Waxaa la soo jeediyay in aad jiidi oo hoos u sawiro ka iPhoto mashruuca iMovie. Haddii ay maya tahay maktabad kasta oo jirta iPhoto, la abuuro hal iyo soo dejinta photos in iPhoto hore. Si aad ku dari videos, in aad sidoo kale "File / Import" ama Event Library tegi karin, ka dibna jiidi oo hoos u doortay videos in waqtiga.
Ka dib markii ay sawiro iyo videos waxaa lagu keeno si ay mashruuca slideshow iMovie, waxaad ku eegaan karo slideshow xumu si fudud adiga oo riixaya bar Space aad keyboard. Markaas ka dhigi dheellitirka clips iyo kala guurka. Tusaale ahaan, mouse ka badan hal clip ama "arrow double" button oo guji icon goobaha, ka dibna aad u heli lahayd clip qabsiga, qabsiga video, sixitaanka kala guurka, iwm
Tallaabada 2. Ku dar music in slideshow iMovie
Music meeleysatay aad slideshow. Ku darista shidmay in slideshow iMovie waa sida fudud sida ku daray sawiro iyo videos. Sidaas guji icon audio keegga hoose midig, iyo jiididda iyo hoos u file maqal ah ayaa doonay inay waqtiga. Heeso badan oo lagu dari karo iMovie. Si kastaba ha ahaatee, iMovie ma taageeri soundtracks badan. Haddii loo baahdo, waxaad u baahan tahay in la isu geeyo badan kuwan raadkaygay song la editor audio dibadda ka hor galinta si slideshow iMovie. Waxa kale oo aad codsan kartaa saamaynta audio iyo dhawaaqa filter isticmaalaya goolka barbaraha.
Tallaabada 3. Dhoofinta aad slideshow iMovie
Movie ka dhigaysa qaybsiga suurtogalnimada aan dhamaadka lahayn. Kuwa geliyaan videos online, iMovie saamaxaya kuwa isticmaala si toos ah u geliyaan in ay MobileMe Gallery, YouTube, Facebook, vimeo, CNN iReport, iwm Haddii aad doorato inaad la wadaagto slideshow iMovie isticmaalaya Browser Media, waxaad ka heli doontaa slideshow u muuqday in codsiyada kale Mac sida iWeb . Waa fikrad wanaagsan in la dhoofiyo slideshow iMovie in Lugood si aad Radidiyaha karaa slideshow si fudud oo dhaqso u hagaagsan la Qalabka telefoonada gacanta ee aad sida iPhone, iPad iyo iPod.
iMovie waxaa ka mid ah in badan oo mawduucyada aad u abuuraan filimada slideshow xirfadeed ee qasabno. Laakiin bilaabayso, waxaa dhaanta inay bilaabo theme u lahayn in ay wax u bartaan iyagoo isticmaalaya iMovie. Haddii aad tahay addict theme slideshow ah, Fantashow for Mac kale oo ay bixisaa dhalaalayay mawduucyada , oo waa qeyb ka wanaagsan in iMovie, laakiin aalada fudud iyo waxqabadka dhakhso. Halkan waa hage ah oo ku saabsan sida loo sameeyo slideshow ah la isticmaalayo habkan badalka iMovie. Baro More >> M
Tallaabada 1. Dooro qaab aad slideshow
Run Fantashow for Mac. Gal iyo dooratid style slideshow jecel maktabadda style ka. Guji "codso" si ay u bilaabaan abuuraya aad slideshow u gaar ah.
Tallaabada 2. shakhsiyeeyo style
Markaas tagaan "shakhsiyeeyo" tab. Waxaad si toos ah jiidi karaan jeedi photos videos ama si aad u storyboard ah. Calan muddada wakhtiga sawiro ama videos kasta adigoo riixaya "Calan Duration" icon.
Waxaad-jiitaa-n daadiyaa aad music in slideshow ama guji "music Fantashow" folder iyo isticmaasho maktabadda music free bixiyo. Ka dib markii ay ku daray music ah, tracker dhawaaqa ka soo muuqan doonaa hoos ku storyboard ah. Double guji inuu kiciyo suuqa kala edit ah. Halkan waxa aad ka jar karo, dhigay bilowgii iyo dhammaadka wakhtiga, mugga qabsato dhawaaqa iyo ka baxeysa ee gudaha / dibedda saamayn sida aad jeceshahay. Waxa kale oo aad ku dari kartaa Intro / credit ama qoraalo tab ah oo u dhiganta sida aad jeceshahay.
Tallaabada 3. Si fudud badbaadiyo ama la wadaagto aad slideshow
Marka la dhammeeyo ka samaynta slideshow ah, tag "Share" tab. Waxaad si toos ah wadaagi karaan shuqulladaada u Facebook ama YouTube ama badbaadin disk deegaanka iyo Qalabka telefoonada gacanta. Waa maxay dheeraad ah, waxa kale oo aad ku gubi karaa in DVD.
top 20 4k wallpapers u computer, telefoonada smart iyo ipad
Hel ah Converter Free AVI aan Watermark
> Resource > Video > Sida loo sameeyo a iMovie Photo Muqaal la Music